Sida Loo Dhiso Olole Dib-U-Howlgalid Macaamiisha Aan Firfircooneyn | Martech Zone
Dhawaan waxaan wadaagnay macluumaad ku saabsan sida loo sameeyo beddel heerka qaddarinta ka-qaybgalka emaylkaaga, oo leh daraasado kiis iyo tirakoobyo ku saabsan waxa laga qaban karo. Sawir-gacmeedkan oo laga soo xigtay Email Monks, E-maylada Dib-u-Hawlgelinta, waxay u qaadataa heer qoto dheer oo faahfaahsan si loo bixiyo qorshe olole dhab ah oo loogu talagalay dib-u-celinta wax-qabadka emaylkaaga.
Celcelis ahaan liiska iimaylka ayaa hoos u dhaca 25% sanad walba. Iyo, Sida laga soo xigtay a Warbixinta 2013 Suuq Sherpa, 75% macaamiisha #email ma shaqeeyaan.
In kasta oo suuqleyda ay caadi ahaan iska indhatiraan qaybta nasashada ee liistada emaylkooda, way iska indhatiraan cawaaqibka. Heerarka kaqeybgalka yar ayaa dhaawacmay sicirka meelaynta sanduuqa, iyo emaylka aan la isticmaalin xitaa waxaa dib u soo ceshan kara ISPs si ay u dejiyaan dabin si loo aqoonsado kuwa wax sheega! Taas macnaheedu waxa weeye macaamiisha nasashada leh ayaa dhab ahaantii saamayn ku leh in macaamiisha email-ka ah ee aad ku hawlan tahay ay arkayaan emaylladaada iyo in kale.
Dejinta Olole Dib-u-Hawlgal
Qaybaha Macaamiisha aan furin, riixin ama aan kajirin liiska macaamiisha emailkaaga sanadkii tagay.
Xaqiijin cinwaanada emaylka ee qeybtaas ilaa a adeegga ansaxinta email sumcad leh.
Send emayl cad oo kooban oo codsanaya macaamilku inuu markale ka-doorto liiska suuq-geynta emailkaaga. Hubso inaad horumariso faa'iidooyinka helitaanka emaylkaaga.
Sug laba toddobaad oo cabir jawaabta emaylka. Tani waa waqti ku filan dadka fasaxa ku maqan ama u baahan in la nadiifiyo sanduuqa sanduuqa oo boos laga dhigto farriintaada.
La socoshada iyadoo leh digniin labaad oo ah in macmiilka emailka laga saari doono wixii xiriir ah oo dheeraad ah illaa ay mar kale doortaan mooyee. U hubso inaad dhiirrigeliso faa'iidooyinka ka helitaanka isgaarsiinta emaylka shirkaddaada.
Sug laba toddobaad oo kale oo cabir jawaabta emaylka. Tani waa wakhti ku filan dadka fasaxa ku maqan ama u baahan in la cadeeyo sanduuqa sanduuqa oo boos laga dhigo fariintaada.
La socoshada farriintii ugu dambaysay ee ahayd in macmiilkii emailka laga saaray lagala xiriiro wixii xiriir ah ee dambe illaa ay mar kale doortaan mooyee. U hubso inaad dhiirrigeliso faa'iidooyinka ka helitaanka isgaarsiinta emaylka shirkaddaada.
Jawaabaha dib u noqoshada waa in lagu mahadiyaa oo xitaa waxaad rabi kartaa inaad ka codsato macluumaad ku saabsan waxa ka dhigaya inay si qoto dheer ula shaqeeyaan astaantaada.
Waxqaban la'aan Macaamiisha waa in laga saaraa liiskaaga. Si kastaba ha noqotee, waxaad jeclaan kartaa inaad u guurto olole dib-u-habeyn ah oo ku saabsan warbaahinta bulshada, ama xitaa olole suuq-geyn toos ah si aad dib ugu guuleysato!
Macluumaadka ka imanaya Emailka 'Monks' ayaa sidoo kale bixiya habab wax ku ool ah oo wanaagsan si loo kordhiyo fursadahaaga si aad macaamiishaada aan firfircooneyn dib ugu hawl gasho:
Tags: infographic emailliiska liistada emailkaliistada liiska emailkahaynta liiska emaylkaemail suufiyadoodiiiimayl-galemail optin ololedib-u-hawlgelinta macaamiisha emailkaemailkasida looolole dib u hawlgalemaylka dib u hawlgelinta
Sida loo Isticmaalo Qiimaha Algorithmic si loo kordhiyo Macaashka